DHAGEYSO: Wasiir ka tirsan Galmudug oo bah-dilay Ciidamada AMISOM ee la geeyay Dhuusamareeb (Ogow Wax badan)! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Wasiir ka tirsan Galmudug oo bah-dilay Ciidamada AMISOM ee la geeyay...
DHAGEYSO: Wasiir ka tirsan Galmudug oo bah-dilay Ciidamada AMISOM ee la geeyay Dhuusamareeb (Ogow Wax badan)!
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Maamulka Galmudug ayaa waxay sheegeen in ay ka war hayaan ciidanka AMISOM ee loo daabulay Magaalada Dhuusamareeb Sabtidii shalay.
Galmudug ayaa sheegtay inay ciidankani yihiin kuwo loogu talo galay sugida Ammaanka, islamarkaana ay xoojinayaan Ciidanka Soomaaliyeed.
Wasiir ku-xigeenka Wasaarada Amniga Galmudug, Mahad Xasan Maxamed oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay inay ciidanka AMISOM ay baahi gaar ah oo deegaanka ka jirtay ku imaan, balse ay qeyb ka yihiin Dedaada Nabadeed ee Dalka.
→ Sii Akhri Wararka Kale ee Maanta:⇓
DHAGEYSO: Maxa Sabab u ah dib u dhacyada badan ee ku yimid Shirka dib u heshiisiinta Galmudug? goormee buu ugu dambeyntii uu furi doonaa?!
Somali police investigate Jubbaland official in custody
Mahad Xasan Maxamed ayaa xusay, in aysan marnaba iyaga islaheyn howl ay qaban waayeen ciidan Soomaaliyeed ayey qabanayaan AMISOM, kaas oo si kale u fasiray arrimaha jira.
Wasiir Mahad, mar la weydiiyey in ay Ciidankaan AMISOM iyo Kuwa Soomaalida loogu talo galay caburin lagu sameeyo dad gaar ah, ayuu taas ka dhigay waxba kama jiraan.
Hoos ka dhageyso Codka Wasiir Mahad:
Wasiir ka tirsan Galmudug